Omuma Chicken Salad - Ezi Ntụziaka
ígwè ịkpụ oat kuki ọ dịghị ime
macaroni na chiiz nwere ehi bekee na tomato
kedu ihe m ga-eji dochie adobo seasoning
Omuma Chicken Salad
N'ime ahịhịa oge ọkọchị niile, a kpochapụwo ọkụkọ salad Ntụziaka bụ ọkacha mmasị mgbe niile na picnic, barbecue, ma ọ bụ ụlọ ọrụ potluck! Naanị ihe ole na ole nwere ike gbanwee ghọọ salad, creamy creamy ma ọ bụ jupụta maka Sanwichi salad sandwich ma ọ bụ kechie!
Debe usoro a dị mfe maka ntinye sandwich ikpeazụ mgbe akwụkwọ ịkpọ oku ikpeazụ ga-abịa! Na-eje ozi n'oge okpomọkụ a na akụkụ nke Pasta Italian pasta na crunchy ọka grilled na bekee !
Efrata na Salad Chicken
Jiri nri fọdụụrụ nri abalị abalị ma ọ bụ ọkụkọ rotisserie fọdụrụnụ ma ọ bụ ọkụkọ eghere eghe.
Iji mee ọkụkọ maka salad ọkụkọ Ọ na-amasị m iji ma poached ọkụkọ ma ọ bụ butere ara okuko ma ọ bụ apata .
Nwere ike iji ọkụkọ mkpọ na tuo mana n'ezie ọhụụ kachasị mma mgbe enwere ike.
Gbaa mbọ hụ na ọkụkọ na-eme ka ọ dị jụụ ma belata ya ma ọ bụ belata ọkụkọ ahụ.
Dika ihe a bu uzo kpochapu salad salad, edebewo m ihe mgbakwunye di obere. Celery maka crunch, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ eyịm maka ekpomeekpo.
E nwere ike iji ụdị mkpụrụ osisi dị iche iche, mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi mee nri na mgbakwunye.
Salad ọkụkọ nwere mkpụrụ vaịn, ube oyibo ma ọ bụ cranberries a mịrị amị bụ ọkacha mmasị. Pecans ma ọ bụ almọnd jikọtara nke ọma na uzommeputa a.
Mayonezi bụ isi nke uzommeputa a ma ọ bụ naanị oge a kara aka.
Inwere ike imepụta ihe ma dochie ụfọdụ mayo maka ranch mgbakwasa ma ọ bụ ọkacha mmasị gị salad mgbakwasa uzommeputa.
Mepụta otu Ube oyibo Chicken Salad site dochie ụfọdụ Mayonezi na mashed ube oyibo.
Etu esi eme salad okuko?
Kwadebe salad anụ ọkụkọ mara mma na nkeji iri na ise na sọọsọ ihe ndị dị mfe.
Iri sie ma sie ọkụkọ ma tinye ya n'ime nnukwu efere nke celery na eyịm.
Gwakọta eji ejiji (kwa uzommeputa n'okpuru) na nnukwu efere. Ituli elu na ọkụkọ.
Na-eje ozi na mpịakọta, achịcha ma ọ bụ n’elu bekee.
Maka akwụkwọ nri sandwich salad achicha, achịcha ọ bụla ga-eme, Mpekere baguette ma ọ bụ buns / rolls na-ejide nke ọma. Nke a bụ obere ala carb na ọ dị oke mma na a toss salad nakwa.
Enwere Ntazi nri?
AKWKWỌ: N'ime akpa ikuku, salad ọkụkọ ga-adịgide otu izu n'ime ngwa nju oyi. Nye ya mbido ma mee ka ekpomeekpo ahụ nwee ntakịrị nnu na ose (ma ọ bụ obere mkpụrụ osisi Dijon mọstad) wee jee ozi!
Friza: Salad anụ ọkụkọ anaghị ajụ oyi nke ọma. Iji kwadebe n'ihu, gbanye ọkụkọ ma kpoo. Mgbe ị dị njikere ime, jikọta ya na ihe ndị dị n'okpuru maka nri ehihie ngwa ngwa!
swiss steak na agba aja aja gravy uzommeputa
Anwụrụ ọkụkọ Salad na Mkpụrụ vaịn - ohuru ohuru ohuru
Ntụziaka Salad Egg kacha mma - All-American kpochapụwo!
Avocado Ranch Chicken Salad Kechie - ejiri ya na ekpomeekpo
Anụ anụ ezi anụ ọhịa Salad - deliciously ọhụrụ & tọrọ ụtọ!
Omuma Tuna Salad - njikere na 10 nkeji!
Shrimp Salad - ebube fabre entreé
4,99site naOgbe 342votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebeiri na ise Nkeji Oge zuru ezuiri na ise Nkeji Ọrụ6 servings Onye edemedeHolly Nilsson A kpochapụwo ọkụkọ salad uzommeputa bụ mgbe niile a mmasị na a picnic, Anụ Mmịkpọ, ma ọ bụ ihe ọrụ potluck! Naanị ihe ole na ole nwere ike gbanwee ghọọ salad, creamy creamy ma ọ bụ jupụta maka Sanwichi salad sandwich ma ọ bụ kechie! Bipute Ntụtụ
▢abụọ iko sie ọkụkọ gbanwere
▢½ iko Mayonezi
▢1 stalk celery gbanwere
▢1 yabasị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dice (ma obu chives ma obu uhie yabasị)
▢1 ngaji Dijon Mọstad
▢½ ngaji nnu nnu
▢ose nụrụ ụtọ
▢1 ngaji ohuru ohuru nhọrọ
Gwakọta ihe niile dị na obere efere ma jikọta ya.
Oge na nnu na ose nụrụ ụtọ.
Na-arụ ọrụ dị ka Sanwichi ma ọ bụ karịrị salad.
Calorisị:206,Carbohydrates:1g,Protein:iri na iseg,Abụba:16g,Abụba Ajuju:3g,Cholesterol:48mg,Sodium:Ogbe 362mg,Potassium:Ogbe 137mg,Eriri:1g,Sugar:1g,Vitamin A:Ogbe 72IU,Vitamin C:1mg,Calcium:10mg,Iron:1mg
Isiokwuọkụkọ ọkụkọ N'ezieSalad Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
Mkpụrụ & Ude Crescents
Chocolate Mgba Chocolate Sheet achicha
Chocolate Silk achịcha
10 Nnukwu eji ọka starch eme ihe!
Ntụ ọka eghe osikapa dị mfe